AKHRISO: Lix Qodob Oo Laga Soo Saaray Carruurtii JIGJIGA Ee La Xidhay Iyo Ururro Ka Qayliyey - Jigjiga Online
HomeSomalidaAKHRISO: Lix Qodob Oo Laga Soo Saaray Carruurtii JIGJIGA Ee La Xidhay Iyo Ururro Ka Qayliyey
Jigjiga (JigjigaOnline) – Ururrada xuquuqda aadamaha u dooda ayaa ka qayliyey in ka badan 500 carruur iyo dhallinyaro ah oo hal maalin gudaheed laga xidh-xidhay magaalada Jigjiga, kuwaas oo iyadoon maskamado la geynin si toos ah loogu daabulay Jeel ku yaalla Godey.
Da’yartan oo ay dawladdu sheegtay inay ka tirsan yihiin kooxo dhallinyaro ah oo rabshado ka sameeyey magaalada gudaheeda, ayaa waxa ka dhashay dareen muujinaya, inay ku lammaan tahay siyaasad iyo dano kale oo cabudhin ah.
Ururka u dooda xuquuqda bulshada Soomaalida ee magaciisa la yidhaahdo Somali Human Rights Commission, ayaa sheegay in xadhigga ardayda iyo da’yartaasi ay tahay raaf, waxaanay ugu baaqeen xukuumadda inay si degdeg ah oo shuruud la’aan ah kusoo deyso.
War-saxaafadeedkan ayaa waxa uu u dhignaa sidan:
JIGJIGA: Muxuu Ku Saabsan Yahay Mudaharaad Salmi Ah Oo Laga Qaban-qaabinayo MMJ?
“Xuquuqda caruurtan Waa lagu xad gudbay.
Ururka xuquuqda Soomaaliyeed Wuxuu si kulul u dhaliilayaa xad gudubta loo geystay ciyaalka magaalada jigjiga oo iyagoon loo kala aaba yeelin sidii xoolo loo xareystay.
500 oo kuray in wadooyinka laga raafo iyadoon wado sharci ah loo marin ma aha wax loo dulqaadan karo.
Iyadoo taasi qalad tahay hadana in gobolo loo tarxiilo xukun maxkamadeed la’aan waa xad gudub labaad oo caruurtaas loo geystay.
Hadaba dowlada waxaan ugu baaqeynaa in qaado tallaabooyinka hoos ku xusan.
1- In si deg deg ah oo shuruud la’aan ah caruurtaas xorriyadoodii loogu soo celiyo.
2- In sabeen xir deg deg ah laga bixiyo
3- In qaab sharciga waafaqsan looga hortago danbiyada kusoo badanaya magaalada.
4- In laamaha amnigu u kuur galaaan danbiilayaasha dhabta oo ey shaqadooda danbi baarista qabsadaan
5- Iney joojiyaan kana waan toobaan in ciqaab wadareed danbi dhacdo.
6- In dowladu maal galiso goobo dhalintu ku ciyaaraan maalinkii habeenkiina ku fiidsadaan.”